Khilaaf iyo is-qabqabsi ka taagan doorashadda Hir-Shabeelle | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaaf iyo is-qabqabsi ka taagan doorashadda Hir-Shabeelle
Waare ayaa doonaya mudo-korarsi, iyadoo ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha Baarlamanka ay diideen arintaas, waxayna ku adkaysteen in doorashadda waqtigeeda ku dhacdo.
JOWHAR, Soomaaliya - Jahweerar iyo khilaaf siyaasadeed ayaa ka taagan doorashadda Hir-Shabeelle, oo la filayay inay qabsoonto bisha soo socota xiligaas oo ku eg mudo-xileedka afarta sano ee Madaxweyne Waare iyo Baarlamanka.
Khilaafka ayaa cirka isku shareeray kadib markii Madaxweyne Waare uu waxba kama jiraan ka dhigay jadwalka doorashadda ee uu saarey gudiga farsamadda, isagoo sabab uga dhigay diidmadiisa in gudiga uu tababar u baahan yahay, sidoo kalena aan dhameystirnayn dhismihiisa, oo gabdho aan ku jirin.
Sida ku cad Jadwalka, Gudiga ayaa go'aamiyay in doorashadda Xildhibaanada Hir-Shabeelle dhacdo inta u dhaxaysa 21-ka illaa 25-ka bishan October 2020, iyadoo Baarlamanka la dhaarin doono 31-ka bishan.
Waare ayaa doonaya mudo-korarsi, iyadoo ku xigeenkiisa Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha Baarlamanka Seekh Cismaan Barre ay diideen arintaas, waxayna ku adkaysteen in doorashadda waqtigeeda ku dhacdo, iyagoo taageeray go'aanka gudiga farsamadda.
Dhanka kale, Wararka ay Keydmedia Online helayso ayaa sheegay in sidoo kale uu jiro khilaaf u dhaxeeyay Beelaha Abgaal iyo Xawaadle, iyadoo sanadkan beesha Xawaadle oo horey u lahayd kursiga Madaxweyne ku xigeenka ay rabto Madaxweynaha.
Hanaanka awood qeybsiga Hir-Shabeelle ayaa ah in Abgaal uu helo Madaxweyne ku-xigeenka maadaama Caasimadda ay tahay Jowhar, sidooo kalena Xawaadle noqdo Madaxweynaha Maamulka, taasoo hadda u muuqato inuu is-bedel lagu samaynayo.
0 Comments Topics: doorashadda hirshabeelle jowhar waare
Farmaajo oo khilaaf dhex-dhigay Xawaadle iyo Abgaal
Warar 15 October 2020 17:55
Gaari lagu rasaaseeyay Sh/Dhexe
Warar 13 October 2020 17:10
Shabaabkii ugu badnaa oo galay degaanada HirShabeelle
Warar 7 October 2020 8:52